अप्रील 10, 2018 साइन्स इन्फोटेक	0 Comments ग्रह, चन्द्रमा, सूर्य, सौर्यमण्डल
सूर्यलाई केन्द्र मानेर अन्य ग्रहहरु, उपग्रहहरु तथा उल्का पिण्डहरूले परिक्रमा गर्ने खगोलीय प्रणालीलाई सौर्यमण्डल(Solar System) भनिन्छ । पृथ्वी लगायत अन्य ग्रहहरूले सुर्यको वरिपरि एक अण्डाकार कक्षमा परिक्रमा गर्दछन् । यो सौर्यमण्डलले फेरि आकाशगंगाको केन्द्रको परिकारमा गर्दछ ।
सूर्य पृथ्वीबाट सबैभन्दा नजिकको तारा हो । यसलाई नेपालीमा घाम वा सुर्जे पनि भनिन्छ । पृथ्वी लगायत अन्य ग्रहहरु, उपग्रहहरु तथा उल्का पिण्डहरूले सुर्यको परिक्रमा गर्दछन् । यो पृथ्वीबाट करिब १,४९५,९७८७०७ कि. मी. टाढा रहेका छ । पृथ्वीमा ऊर्जाको प्रमुख स्रोत नै सूर्य हो । यो पृथ्वीभन्दा १०९ गुणा ठूलो छ भने वजनमा ३ लाख ३०हजार गुणा बढी गहु्रङ्गो छ । यसको बाह्य सतहको तापक्रम ५५४० डिग्री सेन्ट्रीग्रेड छ भने केन्द्रमा १,५०,००,००० डिग्री सेन्ट्रीग्रेड भएको अनुमान गरिएको छ । उच्च तापक्रमका कारणले विशाल हाइड्रोजन बम जस्तै रहेको सूर्य निरन्तर रुपमा बिस्फोट हुँदै उर्जा र प्रकाश उत्सर्जन गर्दछ । सूर्यको प्रकाश पृथ्वीमा ८ मिनेट २० सेकेण्डमा आइपुग्दछ । प्रकाशको गति ३× १०८ मीटर प्रतिसेकेन्ड रहेको छ । सूर्यलाई पृथ्वीबाट हेर्दा शान्त र स्थिर देखिएता पनि अत्यधिक बढी ग्याँसको उपस्थितिका कारणले विशाल आँधी उठिरहेको हुन्छन् । यी ग्याँसका मुस्लाहरु ४ लाख किलोमीटर माथि उठ्छन् । त्यहाँ केही विशाल काला धब्बाहरु पनि छन् । सूर्य आफ्नो मिल्की अवे तारापुंजमा २७५ किलोमीटर प्रतिसेकेन्डको गतिमा घुमिरहेको हुन्छ ।पृथ्वीमा भएका सम्पूर्ण जीवन सुर्य कै कारणले सम्भव भएको हो । बेद र पुराणमा यसलाई सौर्यमण्डलको सर्वाधिक बलशाली ग्रह मानिन्छ । शनीको पिता मानिने सूर्यलाई नवग्रहमध्ये विशेष मान्यता दिईएको छ । रवि, हेली, भास्कर, दिवाकर, प्रभाकर, चित्ररथ आदि यसका पर्याय नामहरू हुन् ।
व्यास ३४७५ किलोमीटर रहेको चन्द्रमा पृथ्वीको प्राकृतिक भू-उपग्रह हो । यो पृथ्वीबाट करिब ३,८४,४०० किलोमीटर टाढा छ । यसलाई पृथ्वीको परिक्रमा गर्न २७ दिन ७ घण्टा ४३ मिनेट ११ सेकेण्ड लाग्छ । पृथ्वीले आफ्नो कक्षमा परिक्रमा गर्दा पृथ्वीबाट हेर्दा चन्द्रमाको सतहमा सूर्यको प्रकाशको मात्रा प्रत्येक दिन विभिन्न परिणाममा देखिन्छन् । यो चक्र सदा चलिरहन्छ । जसबाट हेर्दा चन्द्रपक्ष (Phase of the Moon) को सृजना हुन्छ । पृथ्वीबाट चन्द्रमाको सतहमा उज्यालो उज्यालो भाग बढ्दै जाने क्रमलाई शुक्लपक्ष र अँध्यारो भाग बढ्दै जाने क्रमलाई कृष्ण पक्ष भनिन्छ । यहाँ पानी र वायुमण्डल नभएकाले जीवन असम्भव भएको छ । यहाँको तापक्रम -१८३डिग्री सेन्ट्रीग्रेडदेखि १०६ डिग्री सेन्ट्रीग्रेडसम्म हुन्छ । चन्द्रमा पृथ्वीबाट सबभन्दा नजिक भएपनि अन्तरिक्ष यानलाई त्यहाँ पुग्न ३।४ दिन लाग्छ । पृथ्वीबाट चन्द्रमासम्म पुसग्ने डोरी बनाउने हो भने त्यसले पृथ्वीलाई १० फन्का मार्न पुग्छ । अर्थात् १० पटक पृथ्वी घुम्दा लाग्ने दूरीको बराबरमा चन्द्रमा छ ।
सूर्यको वरिपरी परिक्रमा गर्ने खगोलिय पिण्डहरूलाई ग्रह (Planet) भनिन्छ । सन् २००६ मा चेक गणतन्त्रको राजधानी प्राग भएको इन्टरनेसनल एस्ट्रोनोमिकल युनियन (IAU) को सम्मेलनले ग्रहहरुलाई परिभाषित गर्दै यम ग्रहलाई छुद्र ग्रहको सुचीमा सुचीक्रित गरेको थियो । यसपछी सौर्यमण्डलमा ग्रहहरुको सङ्ख्या आठ पुगेको छ। सौर्यमण्डलको सबैभन्दा ठुलो ग्रह बृहस्पति ग्रह,सबैभन्दा सानो ग्रह बुध ग्रह, सबैभन्दा चम्किलो ग्रह शुक्र ग्रह र सबैभन्दा टाढाको ग्रह बरुण ग्रह हो।अन्तराष्ट्रिय खगोल संघको परिभाषा अनुसार हाम्रो सौर्यमण्डलमा आठ ग्रहहरू छन – बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण बरुण र यम । ज्योतिषहरूको अनुसार ग्रहको परिभाषा अलि भिन्दै छ। हाम्रो देशको ज्योतिष र पौराणिक कथाहरूमा ९ वटा सौर्य पिण्डलाई नौ ग्रह (नव ग्रह)मानिन्छ । जस्तै : सूर्य, चन्द्रमा, बुध, शुक्र, मंगल, गुरू, शनि, राहु र केतु।लाक्षणिक अर्थका आधारमा चन्द्रमा, बुध, गुरू एंव शुक्रलाई शुभ ग्रहको रुपमा हेरिन्छ भने सूर्य, मंगल, शनि, राहु तथा केतुलाई अशुभ ग्रहको रुपमा मानिन्छ ।
← ब्रह्माण्ड (Universe) भनेको के हो ?
सौर्यमण्डलमा भएका ग्रहहरुको बारेमा चर्चा गर्नुहोस् ? →
गणित र यन्त्र विज्ञानमा ग्यालिलियोको योगदान के रहेको छ ?
नोभेम्बर 13, 2018 साइन्स इन्फोटेक 2